Adora & etc.: USA Visa လျှောက်သောအခါဝယ်
USA Visa လျှောက်သောအခါဝယ်
ချီကာဂိုမြို့မှာ နေတဲ့အဒေါ်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် အလုပ်အားတဲ့ ဩဂုတ်လထဲမှာ အမေရိကကိုသွားလည်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ တဝမ်းကွဲညီမလေးကလဲ သူဘွဲ့ယူတာကိုလာစေချင် ကိုယ်ကိုတိုင်ကလဲသွားချင်ချင်ဆိုတော့ ညီအမတွေ ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်တွေ တိုင်ပင်၊ ရီကြမောကြနဲ့ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ ဗီစာ (visa) လျှောက်ဖို့ကိုအချိန်စွဲလာလိုက်တာ... ၂လလောက်အလိုမှာတော့ မလျှောက်မဖြစ် လျှောက်ရတော့မဲ့အချိန်ရောက်လာပါတယ်။
ဒီတော့မှ အင်တာနက် ဝတ်ဆိုက်တွေလိုက်ကြည့်၊ လျှောက်ဖူးတဲ့သူတွေကိုမေး၊ လိုမယ်ထင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလိုက်စုရတာလေ။ ကျမဆီကို တကူးတကလာလည်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ စလုံးကနေပြီး ကျမလိုပဲ သွားလည်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ သူတွေ ကျမလို ဟိုပြေးဒီလွှား စိတ်ပူပြီးဗျာမများရလေအောင် ဒီpost ကိုရေးပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေပြီး သက်မှတ်ထားတဲ့ လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ရပါတယ်။ အလည်သွားတဲ့ကျမအတွက် ဖြည့်ရတဲ့ လျှောက်လွှာက DS-160 ပါ။ "B1/B2 non immigrant visa" လို့ခေါ်ပါတယ်။ အလည်သွားတဲ့သူတွေသာမကပဲ အလုပ်ကနေလွှတ်တဲ့သူတွေလဲ အတူတူပါပဲ။အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာကို တထိုင်ထဲဖြည့်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ရပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ ရပ်ထားပြီး ဖိုင်ထဲမှာ ရက်၃၀ သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ ဖိုင်နဲ့သိမ်းတဲ့အခါ နံပတ် (Application ID) ၁ခုထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီနံပတ်ကိုသုံးပြီး ရက်၃၀အတွင်း ပြင်စရာ၊ ရေးစရာကျန်တာတွေကိုပြင်လို့ရေးလို့ရပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းကနေတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဖြူရောင်နောက်ခံနဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံကိုတွဲတင်ဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့အုံးနော်။ ဒါဆို ပထမအဆင့်ပြီးပါပြီ။
ဒုတိယအဆင့်ကလွယ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗီစာဖိုးကို Standard chartered bank မှာသွားပေးပါ။
ဘဏ်က ခရက်ဒစ်ကာဒ်တွေ Nets တွေနဲ့လက်မခံပါဘူး။ Cash ပဲလက်ခံပါတယ်။ ပြီးရင် ဘဏ်ကနေပြီး အစိမ်းရောင် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်းပြေစာထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြေစာနံပတ်နဲ့တူတူ passportနံပတ်လဲပါ ပါတယ်။ဒါဆိုရပါပြီ။
အပေါ်ကနှစ်ဆင့်ကိုပြီးပြီဆိုရင်တော့ အင်တာဗျူးသွားဖို့ စီစဉ်လို့ရပါပြီ။ အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာတင်တာနဲ့ ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံပေးတာက US ဗီစာဝတ်ဆိုက်မှာအကောင့်ဖွင့်စရာမလိုပါဘူး။ အင်တာဗျူးသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင့်ဖွင့်မှရပါတယ်။ အင်တာဗျူးခေါ်ဖို့ အတွက် အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာ(Application ID) နံပတ်နဲ့ ဘဏ်က ပြေစာနံပတ်လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အဆင့်၁ နဲ့ ၂မပြီးမချင်း အင်တာဗျူးကြိုစီစဉ်လို့မရပါဘူး။ အင်တာဗျူးဝင်ဖို့ ၂ရက်ကနေ တပတ်အထိစောင့်ရတတ်ပါတယ်။ ကျမတုန်းက ၄ရက်စောင့်ရပါတယ်။ အင်တာဗျူးသွားဖို့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အချိန်ရွေးလို့ရပါတယ်။ အစောဆုံးအချိန်က မနက် ၇နာရီ ၄၅မိနစ်ပါ။ အင်တာဗျူးဝင်ဖို့ အချိန်ရပြီဆိုရင် Confirmation letter ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး သိမ်းထားရပါတယ်။
Confirmation letter ထဲမှာ ၁၅မိနစ်ကြိုရောက်ဖို့ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီထက်စောရောက်လဲရပါတယ်။ ၈နာရီ အင်တာဗျူးအချိန်ကို ကျမရောက်သွားတဲ့ မနက်၇နာရီခွဲ အချိန်မှာ ကျမရှေ့မှာလူ၂၈ရောက်ရှိပါတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း သံရုံးထဲပေးမဝင်သေးပဲ အပြင်ကထိုင်ခုံတွေမှာ ထိုင်စောင့်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးမှ တယောက်ချင်းကို လုံခြုံရေးအခန်းကိုဝင် ပြီးစစ်ပြီးမှ သံရုံးထဲကိုဝင်ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်ရဲ့အဖိုး၊အဖွား၊ အဖေအမေ၊ လူကြီးတွေ ဗီစာလျှောက်လို့ (ကိုယ်တိုင်မလျှောက်ပင်မဲ့လဲ) အထဲကိုအဖော်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် လိုက်လို့ရ ပါတယ်။ ဘာလို့ လိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို လုံခြုံရေးကိုရှင်းပြ ရင်ရပါပြီ။
ဝင်လာကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို အခန်းတခုမှာ Qနံပတ်ယူခိုင်းပြီး ထိုင်စောင့်ခိုင်းထားပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့် အမှတ်စဉ်နံပတ်ခေါ်တဲ့အခါ ခေါ်တဲ့ ကောင်တာမှာ အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာကို ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ရယ်၊ အဖြူရောင်နောက်ခံနဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံရယ်၊ ဘဏ်ပြေစာရယ်၊ ပတ်စပို့ရယ်ပေးရပါတယ်။ "စလုံးမှာ ဘာStatus နဲ့နေပါသလဲ" ဆိုတာပဲ လူတိုင်းနီးပါးကိုမေးပါတယ်။ PRဆိုPR၊ ကျောင်းသားဆိုကျောင်းသား၊ အလုပ်နဲ့ဆိုအလုပ် ပြောရင်ရပါပြီ။ ပြီးတဲ့အခါ နောက်ထပ် ကောင်တာတခုကနေပြီး လက်ဗွေနှိပ်ဖို့ခေါ်တာကို ထပ်စောင့်ရပါတယ်။ လက်ဗွေနှိပ်ပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကနေပြီး ဖိုင်တခုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖိုင်ထဲမှာ ပတ်စပို့ရယ်၊ အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာကို ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့ ပထမစာရွက်ရယ်၊ ဓာတ်ပုံရယ်၊ အင်တာဗျူးConfirmation letterရယ်ပဲ ပြန်ပါပါတယ်။ ဗီစာရခဲ့ရင် ပတ်စပို့ကို ဘယ်လိုပြန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ စာရွက်တရွက်လဲရပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာ ပတ်စပို့အတွက် ဖြည့်ဖို့လျှောက်လ၁ရွက် ထပ်ပေးပါတယ်။
စာမျက်နှာတခြမ်းက မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အကြောင်းအချက်အလက်တွေပါ။ ခင်ပွန်း/ဇနီး/ မိဘ/မောင်နှစ်မ အမည်၊ မွေးနေ့ နဲ့အလုပ်အကိုင်တွေဖြည့်ရပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုရင် ကုမ္ပဏီနာမည်ပါရေးရပါတယ်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိရင် ရေးရပါတယ်။။ပြီးရင် တကယ့် အင်တာဗျူးအတွက်နံပတ်ခေါ်မဲ့အချိန်ကိုပြန်စောင့်ရပါမယ်။
သံရုံးရဲ့ ဗီစာဝတ်ဆိုက်မှာ အလည်သွားမဲ့သူတွေအတွက် ဘာစာရွက်တွေယူလာပါလို့မပါပါဘူး။ အဓိကမပါမဖြစ်ပါရမဲ့စာရွက်တွေက သံရုံးရောက်ရောက်ခြင်းထပ်လိုက်ရတဲ့ စာရွက်တွေပါပဲ။ အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာကို ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ရယ်၊ အဖြူရောင်နောက်ခံနဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံရယ်၊ ဘဏ်ပြေစာရယ်၊ ပတ်စပို့ ရယ်ပေါ့။ ရှိသမျှ ပတ်စပို့အသစ်အဟောင်းအကုန်ယူသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ ဗီစာ လျှောက်လွှာကိုအကျိုးပြုမယ်လို့ထင်သမျှစာရွက်တွေလဲယူခဲ့ပါလို့ ရေးထားတော့ ကျမကအောက်မှာရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေကိုလဲပြင်ဆင်သွားပါတယ်။ မေးရင်ပြနိုင်အောင်ပါ။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်အပိုယူသွားတဲ့စာရွက်တွေကိုတောင်းမှပဲပြရပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် တောင်:ကြည့်တဲ့စာရွက်တွေလဲ မတူပါဘူး။
(၁) ဆွေမျိုး၊မိဘ၊သူငယ်ချင်းတွေဆီက ဖိတ်ခေါ်စာ (invitation letter) *အီးမေးကိုပရင့်ထုတ်သွားလို့ရပါတယ်။
(၂) ခရီးကို ဆွေမျိုး၊မိဘတွေကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင် ဆွေမျိုး၊မိဘတွေရဲ့ စပွန်စာ စာရွက်နဲ့ ဘဏ်စာရွက်
(၃) Employment verification letter * အလုပ်မှာတောင်းလို့ရပါတယ်
(၄) ၃လစာ လစာ စာရွက် ( Payslip)
(၅) ဝင်ငွေခွန် ပြေစာစာရွက် (Income tax)
(၆) စလုံးမှာ နေထိုင်ခွင့် ကတ် မိတ္တူ (PR, Employment Pass, Skilled Pass/Special Pass, Student Pass, Dependent Pass etc)
(၇) လေယာဉ်လက်မှတ် booking စာရွက် * travel agent တွေဆီကနေတောင်းလို့ရပါတယ်။
(၂) ဆွေမျိုး၊မိဘတွေကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင် ဆွေမျိုး၊မိဘတွေရဲ့ စပွန်စာ စာရွက်နဲ့ ဘဏ်စာရွက်
(၃) scholarship ရတယ်ဆိုရင် scholarship စာရွက်
(၄) course transcript
(၅) Ph.D ကျောင်းသားတွေဆို ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ thesisရဲ့ အကျဉ်းချုပ် (abstract) ကိုပါပြခိုင်းပါတယ်။
ဒါတွေက ကျမအလှည့်ကိုထိုင်စောင့်နေတုန်း counselor မေးသမျှကိုရေးပြတာပါ။တကယ်လို့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပါမလာတဲ့အခါ counselorခွင့်ပြုရင် နောက်မှ အီးမေးနဲ့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း သွားလည်တဲ့သူအချင်းချင်း၊ ကျောင်းသွားတက်မဲ့သူအချင်းချင်းတောင် မေးတဲ့မေးခွန်း၊ တောင်းတဲ့စာရွက်တွေမတူတဲ့အတွက် လိုမယ်ထင်တာတွေကို တခါထဲပြီးအောင်အကုန်သာယူသွားပါ။ကျမတုန်းကတော့ ဘာဆိုဘာစာရွက်မှတောင်းမကြည့်တဲ့အတွက် သယ်သွားတဲ့စာရွက်တွေအကုန်ပြန်ယူလာရပါတယ်။
ကျမတို့ထိုင်နေရတဲ့ ပေ၂၀x၁၀ ပတ်လည်အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာပဲ တယောက်ပြီးတယောက်ကို ကောင်တာမှာခေါ်ပြီး မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူးတာဆိုတော့ မေးသမျှ မကြားချင် ကြားချင် အကုန်ကြားရပါတယ်။ စပ်စုတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်ကလဲကြောက်နေတာဆိုတော့ သူများတွေကိုဘာတွေမေးလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်။ အင်တာဗျူးက ၃မိနစ်ကနေ ၁၀မိနစ်လောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးအပြီးမှာ ကိုယ် visa ရမရ တခါထဲသိရပါတယ်။ မရတဲ့သူတွေကို ပတ်စပို့နဲ့ ယူကြည့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတခါထဲပြန်ပေးလိုက်တာပါ။
အဖေနဲ့အမေက ဘာလုပ်ပါသလဲ။ ( မိဘအလုပ်အကိုင်မှာ ဘာမှသေသေချာချာရေးမပြပဲ "self employed" လို့ဖြည့်ထားလို့မေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်)
မိဘတွေရဲ့ စီးပွါးရေးကဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ (အလုပ်သမားအရေအတွက်နဲ့ ဖြေလို့ရပါတယ်)
အဒေါ်က USAမှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရပြီးသားလား။
အဖြေတွေအတွက် ဘာစာရွက်မှတောင်းမကြည့်ပါဘူး။ မိဘအလုပ်အကိုင်က လွဲလို့ အဖြေတွေအားလုံး အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာမှာအကုန်ပါပြီးသားပါ။
သူများတွေကို မေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာ ဒါတွေလဲပါပါတယ်။
USAမှာ ဘယ်မှာနေမှာလဲ၊ ဘယ်တွေသွားမှာလဲ။
USAကို ဘာလို့ထပ်သွားလည်ချင်တာလဲ။ ( သွားဖူးပြီးသားလူတွေအတွက်)
ဘာဖြစ်လို့ USAကိုမင်းသွားမှဖြစ်မှာလဲ။ (အလုပ်ကနေ လွှတ်တဲ့သူတွေအတွက် မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းပါ)
ဘာလို့ မင်းနိုင်ငံကနေ visa မလျှောက်တာလဲ။
ဒီဘဏ်စာရွက်ကို ဘယ်ကရတာလဲ။ (ဒီမေးခွန်းက နဲနဲရိုင်းသလိုရှိပေမဲ့ ကျမရှေ့က တယောက်က "အဖေရဲ့ အကောင့်နံပတ်နဲ့ ငွေအမောက် ကို သူ့အမေက ရေးပေးလိုက်တာပါ" လို့ဖြေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပြတဲ့စာရွက်က ဘဏ်က တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့စာရွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတော့လဲ မေးတဲ့လူဘက်ကမလွန်ဘူးပေါ့နော်။)
မင်းအဖေပိုင်တယ်တဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့ ဖုံးနံပတ် သိလား။
ဘာလို့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အကြာကြီးမနေပဲ ခဏ ခဏပြောင်းနေတာလဲ။
မင်းရဲ့လက်အောက်မှာ လူဘယ်၂ယောက်ရှိလဲ။ (မန်နေဂျာ ရာထူးနဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပါ)
အင်တာဗျူးဖြေပြီးလို့ visaရမယ်ဆိုရင် visaကြေး ၃၂ ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကတ် ဒါမှမဟုတ် ငွေသားကို သံရုံးက ပေါက်ဈေးအတိုင်းဖြတ်ပြီးယူပါတယ်။ visaကြေး ငွေပြေစာကို counselorကိုပြန်သွားပေးပြီးရင်တော့ ပြန်လို့ရပါပြီ။ အွန်လိုင်း မှာ လျှောက်လွှာတင်တုန်းက ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ အတိုင်း အိမ် ဒါမှမဟုတ် ရုံးကို ပတ်စပို့ပြန် ပို့ပေးပါတယ်။ အိမ်နဲ့ ရုံးမှာလူရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ လူကိုယ်တိုင်သက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသွားယူရုံပါပဲ။
Posted by Adora etc. at 21:19
Anonymous 25 June 2014 at 23:46
Thanks for ur info sis :)
Adora etc. 26 June 2014 at 21:02
It's my pleasure sis. =)
ညီလင်းသစ်2July 2014 at 04:16
အတွေ့အကြုံနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးပြထားလို့ ဗီဇာလျှောက်ချင်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ပို့စ်လေးပါပဲ...။